Kooxda Barcelona ayaa doonaysa badalka Luis Suarez, laakiin waa kuwee Musharaxiinta?
Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa la soo warinayaa inay hoosta ka xariiqatay xiddigaha Marcus Rashford iyo Harry Kane, isla markaana ka dhigatay labadaan weeraryahan bartilmaameedkeeda, iyadoo kooxdu ay baadi-goob ugu jirto bedelka Luis Suarez xagaaga soo socda.
Rashford kaasoo dhaliyey goolkiisii 50-aad ee kooxdiisa Manchester United kulankii Axaddii ay guusha ka gaareen Norwich City ayaa la la xiriirinayey naadiga Barcelona tan iyo xilli ciyaareedkii 2015-16.
Dhinaca kale Kane ayaa la la xiriirinayaa inuu ka dhaqaaqi doono kooxda Tottenham Hotspur kaddib markii ay si hooseysa ku bilaabatay xilli ciyaareedkan, kooxda Mauricio Pochettino ayaana haatan fadhisa kaalinta 11-aad ee kala sarreynta horyaalka Premier League.
Sida ay warinayso Jariiradda Mundo Deportivo, Kooxda Barcelona ayaa labadaan Weeraryahan u aragta bedelka saxda ah ee Suarez kaasoo 33-sano jirsadan doona bisha Janaayo ee sanadka cusub.
Yeelkeede, waxaa la sheegayaa in labada xiddig ee reer England aysan ahayn bartilmaameedka koowaad ee Barcelona, iyadoo weeraryahanka Inter Milan ee Lautaro Martinez iyo Weeraryahanka Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappe ay u diiradda u saaran yihiin kooxda koowaad ee Barca xagaaga soo aaddan.